Ise Mango Butter Uru I Kwesịrị Knowmara Banyere - Mma
Ise Mango Butter Ga-eme Ka Say Na-asị Shea Butter
5 Mango Butter Benefits That Will Have You Saying Goodbye Shea Butter
Dijital Art nke Kaitlyn Collins dere
Anyị na-agbagharị mgbe niile aki oyibo na shea bọta mana imara maka mango butter? Na-atụgharị, mkpụrụ osisi kachasị amasị anyị nwere otutu nke skincare uru. Vitamin, antioxidants na protein ndị a hụrụ na mango-ọkachasị ya butter – bụ ihe kpatara achọpụtara anyị na creams anyị, egbugbere ọnụ balms na ngwaahịa nlekọta ntutu. Anyị jụrụ Dr. Shasa Hu, onye ụlọ akwụkwọ kwadoro dermatologist na Dr. AK BKỌ skin advisory board member, niile banyere mango butter uru na ihe mere ị ga-agbakwunye ya usoro nlekọta anụ ahụ gị .
Gịnị bụ mango butter?
Mango butter si na ọfụma ... mangoes. Ma ọ bụ ezie na mkpụrụ osisi ahụ dum nwere uru, ọ bụ mkpụrụ ahụ nke nlekọta anụ ahụ na ntutu isi ọla edo. Mango butter nwere mmanụ ọdụdụ nke sitere na mkpụrụ n'ime mango mkpụrụ. Mkpụrụ osisi ndị a jupụtara na fatty acids bara ụba dị mma maka anụ ahụ anyị, ka Dr. Hu na-akọwa. Olulu ahụ na-agafe igwe ebe ọ na-ajụ oyi ma wepụta ezigbo, mmanụ nkịtị. A na-atụgharị mmanụ dị arọ n'ime bọta, creams na balms anyị na-ahụ na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ anyị.
Kedu uru nke mango butter?
Ọ na-edozi ma na-edozi anụ ahụ. Vitamin A, E na C na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie mmiri mmiri ọbụna n’ụbọchị ndị oyi na-atụ. Dr. Hu gosikwara na a na-ejikwa mango butter na abụba bara ụba dị ka acid oleic na-eme ka anụ dị nro ma dị nro.
Ọ na-echebe akpụkpọ gị na ntutu gị pụọ na ụzarị ọkụ UV . Mango butter na-ebu vitamin C, nke bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa antioxidants maka ahụike anụ ahụ, ọ kọwara. Ọ na-agbakwụnye, Vitamin C na-echebe akpụkpọ anyị pụọ na mmebi ihe na-akpata nnwere onwe mgbe ekpughere akpụkpọ anyị na ìhè anyanwụ. (Na nke ahụ: Dr. Hu kwuru na ọ bụ ezie na vitamin C na-echebe megide mbibi anyanwụ, ọ gaghị edochi SPF gị.)
Ọ na-ebelata agbaji ma melite nwuo na kpọrọ nkụ ,mebiri emebima ọ bụ ntutu a na-ete agba . Isi ihe ndị mejupụtara — abụba ndị nwere abụba ndị dị ka Palmitic na isostearic acid — na-arụ ọrụ dị ebube n'ime ka imebi abụọ mezie, na-ebelata dandruff ma na-eme ka eriri gị sikwuo ike. Gbalịa iyi ihe nkpuchi mango butter n'otu ntabi anya ịhapụ ya ka ọ rụọ ọrụ anwansi ya mgbe ị na-ehi ụra.
Ọ na-edozi ma na-ewughachi akpụkpọ gị. N'ihi vitamin E na C dị na ihe ndị sitere n'okike, ọ nwere ike belata ọdịdị nke ahịrị ọma, ahịhịa na ntụpọ gbara ọchịchịrị. Bọta ahụ nwekwara ike ime ka ọ gbatịkwuo ma belata ncha akpụkpọ.
Ọ na-ebelata ọnọdụ ndị na-akpasu iwe . You nwere nkụ sunburn, ahụhụ na-ata ahụhụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ Mango butter nwere mgbochi mkpali na antibacterial Njirimara iji mee ka ọgwụgwọ dị ngwa. Ọ bụkwa nke na-abụghị comedogenic, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara plog clogged ma ọ bụ breakouts.
O nwere ihe ojoo metutara mango butter?
Mango butter zuru oke, belụsọ na ị na-arịa mango (na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnọ ọdụ otu a). Ka o sina dị, ị ga-eme ule patch mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-eji mango butter maka oge mbụ. Ọ bụrụ n’ịhụ ahịhịa ma ọ bụ mgbakasị ọ bụla, kwụsị iji ya ozugbo wee kpọtụrụ dọkịta gị.
Nwetara ya. Ma olee ihe dị iche na mango butter na shea butter?
Ọ bụ ezie na ndị na-eme achịcha nwere ụdị àgwà (ya bụ, ha nwere ume mmiri), ha nwere ụfọdụ esemokwu dị mkpa nke ga - enyere aka duzie nzụta gị ọzọ.
Maka otu, senti pụrụ ịbụ nnukwu ihe. Spoiler njikere: mango butter adịghị n'ezie butter dị obere na-enweghị isi, yabụ atụla anya ịnụ ísì dị ka anwụrụ ọkụ mgbe ị na-eji ya. N'aka nke ọzọ, shea butter nwere ezigbo mmanụ na-esi ísì ụtọ nke nwere ike ịkpasu ụfọdụ iwe.
Ha abụọ banye ngwa ngwa ma mango butter dịtụ ntakịrị, nwere ngwa dị nro ma hapụ nhapụta mmanu mmanu. Fọdụ ndị na-ete shea nwere ike ịdị arọ karị, na oge ụfọdụ, kegriiz ma ọ bụ ọka.
Na ụzọ ị na-echekwa mango butter vs. shea butter nwere ike ime ihe niile dị iche. Ọ bụ ezie na butter butter nwere ogologo ndụ (ọnwa iri na otu ruo ọnwa iri na abụọ), ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-agbanwe siri ike oge ọ dabara na ọnọdụ okpomọkụ. Ka ọ dị ugbu a, mango butter na-agbaze agbaze agbaze ga-eme ka udidi ya dị mma ma nwee nsogbu.
Ọ dị mma, enwere ndụmọdụ ndị ọzọ m kwesịrị ịma?
Enwere ndụmọdụ atọ ịzụrụ, ịchekwa na iji mango butter iji nwee ahụmịhe kachasị mma.
Mgbe ị na-azụrụ mango gị: Emeghi ka o doo anya bu uzo. Ọ na-abụkarị agba ọcha ma na-abata na blocks (ma ọ bụ ude dị njikere). Echefula ilele ndepụta ihe maka kemịkal ma ọ bụ mgbakwunye ọ bụla.
Otu esi echekwa butter gị: Mango butter nwere ike ịdịru ebe ọ bụla n’agbata ọnwa anọ na isii mgbe echekwara ya nke ọma. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi ya ịgbaze ma dịrị ogologo oge, chekwaa ya na gburugburu ebe dị jụụ, gbara ọchịchịrị. Anyị na-atụ aro ka itinye ya na ngwa nju oyi (ọkachasị maka mmụba mmetụta jụrụ oyi ma ọ bụrụ na ị na-emeso anụ ahụ iwe ma ọ bụ nke ọkụ).
Mgbe itinye mango butter: Jiri ngaji, scooper ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abụghị mkpịsị aka gị. Ihe ikpeazu ichoro ime bu kpughee mango gi ka o kpoo oku, unyi ma o bu nje bacteria. Na mgbakwunye, ntakịrị na-aga ogologo ụzọ (scoop nke nwere ụzọ anọ ga-eme!). Tinye ya na ebe akọrọ ma dị ọcha iji mee ka akpụkpọ gị nwee mmiri ruo ụbọchị ọzọ. Dr. Hu na-atụ aro iji mango butter otu ugboro n'ụbọchị (ọkachasị maka ndị nwere akpụkpọ anụ) ma tinye ya na anụ ahụ (ọ dịghị mkpa ịhịa aka na aka gị mbụ).
Otu esi eme DIY Mango Isi
Ọ dị mma, ị zụrụ bọta mango dị ọcha ma ugbu a ọ bụ oge iji mee ka ị bụrụ butter butter. Tupu ịmalite, ị ga-achọ & frac12; otu iko mango butter blọk, & frac14; to & frac12; iko nke mmanụ ụgbọelu (dị ka jojoba, almọnd ụtọ, argan, biva ma ọ bụ mmanụ ube oyibo, ịkpọ aha ole na ole), mmanụ dị mkpa (dị ka lavender , chamomile , rose ma ọ bụ sandalwood), igwekota igwe eletrik na ite.
Kwụpụ 1: Akpa, jupụta ite na & frac14; iko mmiri ma tinye ya na stovu. Ekem, gbue mango butter na-etinye n'ime cubes tupu ị gbakwunye ha na saucepan.
Nzọụkwụ 2: Gbakwunye mmanụ ụgbọelu ị họọrọ na ite mmiri ma bido. Ozugbo ngwakọta ahụ gbazee, gbanyụọ ọkụ ma wepụ ihe oriri. Mee ka ngwakọta ahụ dị jụụ ruo nkeji iri ruo mgbe ọ siri ike ma ọ gaghị esi ike. (Ndụmọdụ bara uru: Gbapụta ya na friza iji mee ka usoro jụrụ oyi ngwa ngwa.)
Kwụpụ 3: Nyefee ngwakọta na igwekota eletrik gị ma gbanye ya na ala. Mee ka ọ pịa maka minit ise ma gbakwunye ihe dị ka iri abụọ ruo iri anọ nke mmanụ kachasị mkpa ị chọrọ (maka ọbụlagodi uru na isi na-esi isi). Mgbe nkeji ise gachara, lelee ka ụdị ahụ dị ude n’ụra.
Kwụpụ 4: Ozugbo a pịaziri butter butter gị na izu okè, tinye ya na iko iko ma debe ya na ebe dị jụụ, nkụ. Jiri dika odi nkpa.
Ọ bụrụ na ị nọ n’ahịa maka ihe okike dị iche iche na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha, na-adị ọcha, elepụ anya karịa mango butter. Ọ nwere ọtụtụ uru iji rụkwaa ma mee ka anụ ahụ gị dị jụụ. Na mgbakwunye, ọ ga - ewe naanị ụzọ anọ iji mee bọta nke gị n'ụlọ. Can’tnweghị ike ịgahie na nke ahụ.
Atụmatụ maka ezigbo ntutu
Njikọ: 21 Shea Butter Jiri Na Anyị Betting Ọ bụ Ọzọ aki oyibo mmanụ
Mango dị ọcha
ZỤTA UGBU A ZỤTA UGBU A
Ancient Health ịgba akwụkwọ Raw Mango Butter
Sky Organics Moisturizing Mkpụrụ Mango
Dr. Brandt Triple Antioxidant Ihu Ude
Petal Fresh Na-akọwapụta Isi Butter
Isi Shop Mango Isi Isi
Florence site na igwe igwe ihe eji eme anwansi nke n’eme ka aru oria
Osmosis Mma Tropical Mango Ihe mgbochi Ndozi Nkpuchi
ihe a na-eji iji shampoo dị nro
eziokwu gbasara ndị amụrụ n'ọnwa Ọktoba
ụwa fim kacha mma
Hollywood movie dabere na akụkọ ihe mere eme
nri India nri
ọchị na-ekwu banyere alụmdi na nwunye